श्रावण १४, २०७५ डा. अरुणा उप्रेती
काठमाडौँ — कर्कलोको नाम लिएपछि धेरैले ‘त्यस्तो पनि तरकारी हुन्छ र ? छ्या’ भनेर नाक खुम्च्याउँछन् । कर्कलोको पौष्टिक तत्त्वबारे थाहा पाए भने आहा भनेर खान थाल्छन् कि ! ऋषि पञ्चमीका दिन बिहान पूजा गरेपछि महिलाले कर्कलो र भात खाने चलन छ । व्रतसम्बन्धी दर्शनको म विरोधी हुँ, तर त्यो दिन पकाइने कर्कलो र भात म मिठो मानेर खान्छु ।
माटोमा दाना छरेपछि धेरै स्याहार नगरेरै लट्टे हुर्किन्छ । हरियो र रातो लट्टे दुवैको स्वाद मिठो हुन्छ । यसको पात टिपी कोदो र फापरको पिठो हालेर खान मिल्छ । लट्टेको पातमा गोलभेँडा हालेर पकाएपछि भात वा रोटीसंँग कपाकप खान सकिन्छ । यो स्वाद तथा पोषण दुवैका लागि हो । लट्टेको दानाबाट अनेक परिकार बन्न सक्छन् । लट्टेको दाना भुटी केही तरकारी हालेर पकाउँदा स्वादिष्ट खाजा बन्छ । दाना पिसेर आटामा मिसाए स्वस्थकर रोटी बन्छ । बालबालिकाले हरियो सागपात नखाने समस्याबाट प्रत्येक अभिभावक पीडित हुन्छन् । दाल वा तरकारीमा लट्टेको दाना वा पात मिसाएर खानदिए बच्चाको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ । लट्टेमा गहुँभन्दा बढी रेशादार र लौह तत्त्व पाइन्छ ।
यो गर्भवतीका लागि अति उपयोगी छ । तर तराईमा प्राय: गर्भवतीका लागि कमै प्रयोग गरेको पाइन्छ ।
पोषणयुक्त कर्कलो र लट्टेको प्रबद्र्धनमा सरकारले कहिले ध्यान दिने हो ?
प्रकाशित : श्रावण १४, २०७५ ०७:२८